Super सुपर उपयोगी उपकरण वेबसाइट सगाई सुधार गर्न को लागी Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 17, 2019 शुक्रबार, अप्रिल 23, 2021 जेसन ग्रिल
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, ग्राहकहरु द्वारा डिजिटल मिडिया को उपयोग बढेको कम्पनीहरु आफ्नो ब्रान्ड मार्केट को तरीका परिवर्तन भएको छ। व्यवसायहरूसँग केहि मिनेटहरू हुन्छन् आगन्तुकको ध्यान खिच्न र उनीहरूको खरीद शक्ति नियन्त्रण गर्न। ग्राहकहरूको लागि धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, प्रत्येक संगठनले मार्केटिंग रणनीतिहरूको एक अद्वितीय मिश्रण फेला पार्नु पर्छ जुन उनीहरूको ब्रान्डमा ग्राहक वफादारी सुनिश्चित गर्दछ।
जे होस्, यी सबै रणनीतिहरू अब निर्माण र वेबसाइट संलग्नतामा सुधार गर्नमा केन्द्रित छन्। हामीले केहि कारणहरू संकलित गरेका छौं किन ग्राहकको संलग्नतालाई प्राथमिकता मानिन्छ किन कि सबै मार्केटिंग रणनीतिहरूको अन्तिम लक्ष्य मात्र हो।
द्वारा प्रकाशित एक लेख अनुसार फोर्ब्स, 50०% भन्दा बढि ग्राहकहरू उत्कृष्ट ब्रान्डको अनुभवको लागि प्रीमियम तिर्न खुशी छन्
जबकि अर्को लेख द्वारा प्रकाशित lifehack भन्छन कि व्यस्त ग्राहकहरु लाई 25% तिर्न तिर्ने जो विश्वास गर्दैनन्
Lifehack द्वारा समान लेखले यो पनि बताउँछ कि 65 XNUMX% भन्दा बढी ग्राहकहरूले विशेष साइटहरूमा उनीहरूको उपचार र सुविधाको आधारमा उत्पादनहरू खरीद गर्दछन्
यद्यपि धेरै साइटहरू लोकप्रिय छन्, बहुसंख्यक ग्राहकहरू अन्तमा प्राप्त जानकारीको मात्रासँग खुसी छैनन्। यो कम्पनीहरूका लागि स्पष्ट स is्केत हो कि तिनीहरूले सही जानकारी र / वा सन्देश सही समयमा सही प्रभाव प्रदान गर्न बढी ध्यान दिन पर्छ। धेरै उच्च श्रेणीका वेबसाइटहरूले प्रत्येक वर्ष औसतमा १०००,००० भन्दा बढी आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, मार्केटिंग विभागहरूले एकल आगन्तुकलाई समेत बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। भाग्यवस, त्यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जसले मद्दत गर्न सक्दछ ग्राहक सन्तुष्टि प्राप्त गर्दै। तिनीहरू तल हेर्नुहोस्।
P व्यावहारिक उपकरणहरू जुन वेबसाइट सage्लग्नता बढाउँदछ
१. एनालिटिक्स: मार्केटिंग रणनीतिहरू ग्राहक संलग्नता सुधार गर्न नयाँ विज्ञापन अभियान शिल्प गर्न डाटा प्रयोग गर्दछ। एनालिटिक्स उपकरणलाई धन्यवाद, कम्पनीहरूसँग अब बहु डेटा पोइन्टहरूमा पहुँच छ। व्युत्पन्न परिणामहरू बहु-स्तर टच पोइन्टहरूमा उनीहरूको ग्राहक आधारमा निजीकृत सन्देशहरू डिजाइन र पठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपकरणको रूपमा मोबाइल एनालिटिक्सले पनि ट्र्याक्सन प्राप्त गर्दैछ। ध्यानमा राख्नु पर्ने एउटा कुरा भनेको बिक्री, आईटी र मार्केटि departments विभागहरूले राम्रो अभियानहरू सिर्जना गर्न कन्सर्टमा काम गर्नुपर्दछ। यस क्षेत्रमा अझै धेरै कामहरू जारी छन् किनकि कम्पनीहरूले कार्यान्वयन र मिडिया प्लेसमेन्टसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।
Live. लाइभ कुराकानी: प्रोएक्टिभ च्याट आजका दिनहरूमा कम्पनीहरूले धेरै प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण बनिरहेको छ। र यो सहि र तुरून्त गर्नका लागि धेरै संगठनहरूले लाइभ च्याट सफ्टवेयरको विचारलाई त्याग्दैनन्। यद्यपि बजारमा धेरै विकल्पहरू छन् जुन एकसँग व्यवस्थित गर्न सजिलो छैन। तर यदि तपाईंसँग समर्थन उपकरण छ जस्तो प्रोप्रोफ च्याट, द्रुत समर्थन प्रदान केक को एक टुक्रा हुन्छ।
प्रत्यक्ष कुराकानी सफ्टवेयरले तपाईंको अपरेटरहरूलाई आगन्तुकहरूको व्यवहार बुझ्न र कुराकानी बधाई जस्ता सुविधाहरूको साथ सक्रिय कुराकानी सुरू गर्न अनुमति दिन्छ। यसले केवल तत्काल समर्थन लाभलाई बढावा दिदैन तर आगन्तुकहरूको लागि निजीकृत समर्थन अनुभव पनि निर्माण गर्दछ। यति धेरै सुविधाहरू सँगै काम गर्दा, तपाईंको व्यवसायले आगन्तुकको लामो समयसम्म रहन सुनिश्चित गर्न सक्छ र तिनीहरूले तपाईंको अपरेटरहरू सिफारिसहरूको आधारमा खरीद पूरा गर्दछन्।
Mobile. मोबाइल समर्थन: मोबाइल अनुप्रयोगहरू अधिक सामान्य हुँदै गइरहेका छन् किनकी तिनीहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ र ग्राहकलाई उन्नत खरीद अनुभव प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, धेरै खुद्रा विक्रेताहरू अनुप्रयोग प्रयोगकर्ताहरूमा जाँदा पनि, उनीहरूलाई अook्कित राख्न राख्न स्टीपर छूट प्रस्ताव गर्दछ।
अर्को ग्राहक समर्थन च्यानलको रूपमा, अनुप्रयोग समर्थनमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले समान र सिमलेस शपिंग अनुभव प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन्। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ग्राहकले यस विकल्पमा पहुँच गर्न अनुमति दिएको छ, ताकि तपाईं कानुनी लडाईमा नउन्नुहोस्।
4. २ 24/7 समर्थन उपकरणहरू: त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन एकले बहु च्यानलहरूमा बिक्री बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ। राम्रो फेला पार्नुहोस् र ग्राहकहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्नुहोस् जबकि निर्णय प्रक्रिया साथै खरीदको साथ। यी उपकरणहरू कम्पनीको वेबसाइटमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ संलग्नता र अधिकतम लाभहरू अनुकूलन गर्न।
Social. सोशल मिडिया प्लेटफार्महरू: जसरी वेबसाईट हुनु एक आवश्यकता हो, प्रभावकारी सामाजिक मिडिया उपस्थितिको माध्यमबाट तपाइँका ग्राहकहरूसँग संलग्न हुनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ग्राहकहरू इन्स्टाग्राम, पिन्टेरेस्ट वा फेसबुक viaरेसर्च मार्फत कम्पनीहरूसँग जडान गर्न मन पराउँछन् कि व्यक्तिहरूले किनेका छन् 40% अधिक यदि प्रस्तुतीकरण र उत्पादको कहानी लाइन राम्रो छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो केवल एक खाता मात्र पर्याप्त छैन तर कसैलाई निगरानी गर्न पनि आवश्यक छ। एक टोलीले वास्तवमा मद्दत गर्न सक्छ ग्राहकको प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिन र सही जानकारीका साथ मुद्दाहरू वा प्रश्नहरूको उत्तर दिन। तपाइँको ग्राहकहरुलाई छिटो जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेर, तपाईले उनीहरूको रोक्ने सम्भावना मात्र बढाउनुहुन्छ तर तपाईको ब्रान्डप्रति उनीहरूको वफादारी बढाउनुहुन्छ।
Call. कलब्याक सुविधा:व्यवसाय र ग्राहकहरु लाई धेरै प्राथमिकताहरु juggle गर्नु छ र उत्तर जेट गति मा खोजिन्छ। त्यहाँ प्रोग्रामहरू छन् जुन एक कम्पनीले स्थापना गर्न सक्दछ र कल प्रतिनिधित्व गर्न सेवा प्रतिनिधिहरूका लागि प्रयोग गर्न। जबकि ग्राहकहरूले कहिलेकाँही उनीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिनु अघि केही बखत पर्खनु पर्दछ, तिनीहरू लाइनमा रहन इच्छुक छन् भन्ने तथ्यले उनीहरूको चासो र ब्रान्डसँगको स indicates्केतलाई दर्शाउँछ।
Help. मद्दत डेस्क: यो सायद एक अत्यावश्यक उपकरण हो जुन व्यापारले कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुँदैन। टिकट प्रणालीको प्रयोगले मुद्दाहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्दछ र धेरै आवश्यक उत्तरहरू छिटो प्रदान गर्दछ। टिकटहरू समस्या समाधान सुरू गर्न र एक संकल्प प्रदान गर्न ट्र्याक गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
यस प्रक्रियाको लागि भविष्यवाणी गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग अत्यधिक उपयोगी साबित हुन सक्छ किनकि अग्रिम समस्याहरूको पूर्वानुमान प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ। यदि ग्राहकले त्यस्तो कार्यक्रम प्रयोग गर्दछ भने ग्राहक प्रभावित हुन्छन् - यो उत्तम ब्राण्ड बृद्धि र ग्राहक सन्तुष्टिको लागि राम्रो हो।
++ सुपर उपयोगी उपकरणहरूको उपयोग लपेट्दै
टेक नवीनताहरूका लागि धन्यवाद, धेरै कम्पनीहरूले नयाँ उत्पादनहरू विकास गरिरहेका छन् जसले ग्राहक-मैत्री समाधान प्रदान गर्दछ। तिनीहरू जो सही उपकरणमा लगानी गरेर प्रवृत्ति अगाडि रहन सक्षम छन्, ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गरेर उनीहरूलाई टाढा गरी कर्भको अगाडि रहन्छन्।
त्यहाँ सेवा कम्पनीहरू छन् जसले यी सबै उपकरणहरू प्रदान गर्न सक्दछ र व्यवसायलाई तिनीहरूका मुख्य कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाइँको वेबसाइट सment्लग्नता, उत्पादकता र ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन उपलब्ध विशेषज्ञता किन प्रयोग नगर्ने - सबै एकै समयमा?
टैग: प्रत्यक्ष कुराकानीमोबाइल समर्थनवेबसाइट एनालिटिक्स
जेसन एक वरिष्ठ टेक्निकल लेखक हाल सम्बद्ध छ प्रोप्रोफ च्याट। उदीयमान ग्राहक समर्थन उत्पादनहरू, ग्राहक समर्थन उद्योगको प्रवृत्ति र त्यस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्ने वित्तीय प्रभावहरूको बारेमा लेख्न पाउँदा उनी रमाउँछन्। आफ्नो खाली समयमा, जेसन नयाँ संस्कृति र परम्पराको बारेमा सिक्न व्यापक यात्रा मन पराउँछन्।
एक्स्टोल: ब्रान्ड वकालत र रेफरल मार्केटिंग